सरकार के अब कोही भोकै मर्दैनन ? - कृषि डेली
Home banner सरकार के अब कोही भोकै मर्दैनन ?
सरकार के अब कोही भोकै मर्दैनन ?
काठमाडौं – सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाले खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
Previous articleयसकारण कृषि कर्ममा प्रविधिको महत्व छ
Next articleतरकारी व्यवसायीको दादागिरी, फेरी सरकारी टोली माथि आक्रमण